ITUNES ကို UPDATED မဟုတ် - ITUNES ကို - 2019
ထိုပြဿနာမှအကြောင်းရင်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ: iTunes ကို updated မဟုတ်
အင်တာနက်ပေါ်ရှိတချို့ကက်ဘ်ဆိုက်များအသုံးပြုသူများအတွက်ပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်။ အမည်မဖေါ်ပြ - ထိုအရပ်၌ရဖို့, သင်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကိုသုံးနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးအခြို့သောအချိန်များအတွက်တစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ IP-address ကိုလက်ခံရရှိ, နှင့်ပိတ်ဆို့ site ကိုရှေ့တော်၌အဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်။ ဤနည်း၌သင်တို့ကိုလျင်မြန်စွာမဆိုတစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့လိပ်စာရန်သင့်အစစ်အမှန် IP ကို-လိပ်စာကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီး, အလွယ်တကူပိတ်ဆို့က်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်နေသောကြောင့်ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အ Browser ကို extensions တွေကိုအလွန်လူကြိုက်များကြသည်။ ဤအချိန်ကျွန်တော်အသုံးပြုသူများအ Yandex Browser ကိုအသုံးပွုနိုငျသောမျှမျှတတလူသိများတဲ့ Browser-ထို့အပြင် ZenMate, အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
Yandex Browser ကိုစူပါမားကက်ကို Google Chrome နဲ့ Opera လျှောက်လွှာထဲကနေ extension များ၏ installation ထောက်ခံပါတယ်။ extension ကို Download လုပ်, သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ:
//chrome.google.com/webstore/detail/zenmate-vpn-best-cyber-se/fdcgdnkidjaadafnichfpabhfomcebme - Google ကဝက်ဘ်စတိုးကနေ
အော်ပရာကနေ Add-ons တွေကို - //addons.opera.com/ru/extensions/details/zenmate-for-operatm/
တိုးချဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အလွန် setting ကိုတူညီသည်။ က add-ons တွေကိုအော်ပရာ၏ဥပမာတစ်ခုစဉ်းစားပါ။ "ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါYandex Browser ကို Add":
ပြတင်းပေါက်မှာ "ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ကလစ်အတည်ပြုextension ကို install လုပ်":
သစ်တစ်ခု tab မှာအောင်မြင်သောတပ်ဆင်ပြီးနောက်ပရီမီယံ-Access ကိုတစ်ဦးအခမဲ့အစမ်းလက်ခံရရှိများအတွက်မှတ်ပုံတင်ကြေး၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်:
မှတ်ပုံတင်မည်, ကြောင့် window ၏ထိပ်မှာအကျယ်ချဲ့ icon ပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, မည်သည့်အမှု၌, သင့်အကောင့် ZenMate prompt ကို entry ကိုရှိသည်:
အကောင့်တစ်ခု Create "ခလုတ်ကိုအောက်မှာပြုပါရန်အလွန်လွယ်ကူသည်entry ကို"ကိုနှိပ်ပါ"အကောင့်သစ်ကိုဖန်တီး"ဒါမှမဟုတ် browser ကို install လုပ်ပြီးနောက်ချက်ချင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာရုံးတင်စစ်ဆေးပရီမီယံ-access ကိုရန်အဆိုပြုချက်ကိုအတူမှတ်ပုံတင်ခြင်းဝင်းဒိုးကိုသွားပါ။
သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပြီး password ကိုဖန်တီးပါ။ မှတ်ပုံတင်ပုံစံလက်အောက်တွင်စစ်ဆေးမှတ်နှင့်အတူအမှတ်နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအချက်တွင်ပြုလုပ်မဟုတ်ရင်သင်မှတ်ပုံတင်မသွားဘူး, တစ်ဦးကို tick ဖယ်ရှားပစ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ သို့သော်အီးမေးလ်ကိုကို tick အားဖြင့်သတင်းလွှာ ပတ်သက်. အချက်နှင့်အတူဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်, သင်ကအတည်ပြုချက်ကိုအီးမေးလ်နှင့်အခမဲ့အစမ်းပရီမီယံ-Access ကိုရတဲ့၏ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုနှင့်အတူအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ စာရေးသူခံယူချင်ပါဘူး, သင်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုသုံးစွဲဖို့အခမဲ့ခံစားရနိုင်သည်
သင်မှတ်ပုံတင်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောကြောင်းကိုသင်၏စာတိုက်ပုံးသွားပြီးမှတ်ပုံတင်အတည်ပြုပါ။ အဲဒီနောကျသငျသညျလုံခြုံစွာ Anonymous ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤတွင်အဘယျသို့မိမိအ menu ကိုဖွင့်:
သင်ပိတ်ဆို့ site ကိုမှတိုက်ရိုက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် ZenMate အလိုအလျောက် enabled ။ ဒါ့အပြင်သင် pre-configure extension ကိုတတ်နိုင်သမျှဥပမာ, တိုင်းပြည်, ထို IP ကို-လိပ်စာသင်ရရှိချင်တယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဝန်ဆောင်မှုရိုမေးနီးယားအတွက် IP ကိုထောက်ပံ့ပေး, ထိုသို့ပြောင်းလဲပစ်ရန်, သင်ဒိုင်းလွှားနှင့်အတူ icon ပေါ်မှာပြတင်းပေါက်၏အလယ်တွင်နှိပ်ဖို့လိုအပ်:
ပြီးသားသင်အသုံးပြုတဦးတည်းသော4အခမဲ့နိုင်ငံများစာရင်းတစ်ခု:
နိုင်ငံများ "ပရီမီယံ" ဟုအဆိုပါတိုးချဲ့၏အပြည့်အဝဗားရှင်းဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်စဉ်အတွင်းအခမဲ့အချို့သောအချိန်များအတွက်ထိုသို့ခံသောသူတို့အားရရှိနိုင်ပါသည်။ ညာဘက်အပေါ်တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲပစ်ရန်, ဖွင့်က "စကားလုံးအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါပြင်ပြု".
သည်အခြား setting များအဘို့, "ပေါ်တွင် click လုပ်setting များကို။ "အဲဒီမှာ window ၏အောက်ခြေတွင်သင် OFF ဖို့ ON ပြည်နယ်နှင့်အတူ switch ကိုအစားထိုးခြင်း, ချဲ့ထွင်အလုပ်ကို turn off နိုင်သည်
အခမဲ့ဗားရှင်း ZenMate တည်ငြိမ်သည်နှင့်အပြည့်အဝကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်ကာကွယ်ပေးသည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျ, ထိုကဲ့သို့သောသာသင့်ရဲ့ရှေးခယျြသောဆိုဒ်များပေါ်မှာရှိသမျှ ZenMate အတွက်ကိုယ်စားပြုနိုင်ငံသို့မဟုတ် AutoRun feature ကိုဖြည့်စွက်၏ geolocation ရွေးချယ်ဖို့စွမ်းရည်အဖြစ်အချို့သောအခြားတိုးချဲ့ options တွေကိုရရှိနိုင်မရှိကြပေ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိရဲ့ IP-address များနှင့် encrypt လုပ်ထားသည့်လှုပ်ရှားမှုများ၏အစားထိုး: သို့သော်များစွာသောအသုံးပြုသူများကိုအောင်မြင်စွာက၎င်း၏အဓိက function ကိုဖျော်ဖြေချဲ့ထွင်၏လွတ်လပ်သောဗားရှင်းကိုအသုံးပြုပါ။